भारतमा नेपालीलाई बैंक खाता खोल्न सहज बनाइने 'काउन्टर भेलिङ' हटाउन नेपालको माग - Nepal News - Latest News from Nepal
भारतमा नेपालीलाई बैंक खाता खोल्न सहज बनाइने ‘काउन्टर भेलिङ’ हटाउन नेपालको माग
२७ जेठ, काठमाडौं । नेपालका बैंकहरुले थोरै ब्याज दिएपछि भारततर्फ नेपाली रुपैयाँ अपचलन भइरहेको छ । तर, यहीबेला नेपाली नागरिकलाई भारतमा सहजरुपमा बैंक खाता खोल्न दिनुपर्ने माग लिएर अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको टोली दिल्ली पुगेको छ ।
अर्थमन्त्री महतले भारतमा रहेका नेपालीहरुलाई बैंक खाता खोल्न सहज व्यवस्था गराइदिन त्यहाँका वित्त मन्त्री अरुण जेट्लीसँग आग्रह गर्ने भएका छन् ।
हालसम्म पासपोर्ट भएका नेपालीहरुले जुनसुकै भारतीय बैंकमा सजिलै खाता खोल्न पाउने व्यवस्था छ । तर, पासपोर्ट नभएकाहरुले भने आफूसँग भएको नागरिकता वा अन्य परिचयपत्र भारतस्थित नेपाली दूतावास वा भारत सरकारले तोकेका अन्य निकायबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्री महतले परिचयपत्रकै आधारमा पनि भारतमा नेपालीहरुलाई बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘भारतमा रहेका अधिकांश नेपालीहरुसँग पासपोर्ट नभएकाले उनीहरु झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गरेर बैंक खाता खोल्नुभन्दा हुुण्डी वा अन्य गैरकानूनी प्रक्रियाबाट नेपालमा पैसा पठाउँदै आएका छन्’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने- भारतस्थित नेपालीहरुले सहजै बैंक खाता खोल्न पाए भने औपचारिक च्यानलबाट भित्रिने रेमिटान्स बढ्छ ।’
भारतीय बैंकमा नेपालीलाई खाता खोल्न सहज गराइए अबैध कारोबार नहुने र यसबाट दुबै सरकारलाई फाइदा हुने श्रेष्ठको दाबी छ ।’
तर, यसअघि राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर युवराज खतिवडाले भारतीइ बैंकले बढी ब्याज दिएका कारण नेपाली रुपैयाँ भारतमा अपचलन भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
नेपाली व्यवसायीमाथि ‘काउन्टर भेलिङ’
नेपालबाट भारत निर्यात हुँदै आएका केही वस्तुहरुलाई निरुत्साहित गर्न भारत सरकारले ‘काउन्टर भेलिङ ड्यूडी’ लगाउँदै आएको छ । भारतकै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न भारत सरकारले यस्तो कर लगाएको हो ।
काउन्टर भेलिङ कर लगाइएका नेपाली वस्तुहरु सो करकै कारण भारतीय बजारमा महंगो हुने भएकाले त्यस्ता बस्तु उत्पादनमा नेपाली उद्यमीहरु निरुत्साहित बन्दै आएका छन् ।
मन्त्री महतको टोलीले भेलिङ ड्यूडी सरल बनाउन भारतीय वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीको टोलीसँग आग्रह गर्नेछ । साथै द्वीपक्षीय लगानी तथा व्यापार विस्तारका सम्बन्धमा पनि छलफल हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भारु समस्याबारे छलफल हुने
विगत ६ महिनादेखि नेपालमा पाँच सय र हजारका भारतीय नोटहरु औपचारिक रुपमा चल्न थालेका छन् । यसअघि नेपालमा पाँच सय र एकहजार रुपैयाँका भारु नोटको कारोबार गर्नु अवैधानिक थियो ।
तर, पाँच सय र हजार दरका भारतीय नोटहरु भारतबाट औपचाकिररुपमा भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरिए पनि नेपालबाट त्यस्ता नोटहरु भारतमा लैजान पाउने व्यवस्था छैन ।
‘लामो समयदेखि हामीले भारतीय नोटहरु ल्याइरहेका छौं । सरकारसँग भारतीय मुद्राको सञ्चिति पनि उल्लेख्य छ । तर, हामीसँग बढी भएका ठूला दरका भारतीय नोट फिर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था छैन’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
अर्थमन्त्री महतले नेपालमा धेरै भएको नोट फिर्ता लिन र भारु कारोबारमा सरल व्यवस्था मिलाउन भारतीय समकक्षीसँग आग्रह गर्ने श्रेष्ठले बताए ।
घरजग्गा पासमा महानगरले रोक लगायो